होम आइसोलेसनका कोरोना संक्रमितलाई प्रभावकारी बन्दै 'डिजिटल मेडिकल' सेवा | Notebazar
काठमाडौं। २२बैशाख, २०७८, बुधबार / May 05, 2021 18:27:pm
विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाले धेरै जसोे क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाएको छ । शिक्षा, रोजगार, बैंकिङ लगायतका हरेक क्षेत्रमा जस्तै स्वस्थ उपचारमा पनि सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा सुरु भएका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अनलाइन मार्फत सपिङ्ग गर्ने, विभिन्न भुक्तानी गर्ने, अध्ययन गर्ने अध्यापन गराउने गरिएको भएपनि कोरोना संक्रमितको उपचार पनि सोही माध्यमबाट सुरु भएको छ । कोरोना भाइरसको पहिलो लहरको सुरुवाती देखिनै डाँफे केयरले होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितलाई डिजिटल माध्यबाट मेडिकल सेवा उपलब्ध गराउदै आएको छ ।
डाँफे केयरले कोरोनाको पहिलो लहरमा एक हजार बढीलाई सेवा प्रदान गरेको थियो । नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि सुरु भएको निषेधाज्ञापछि मात्र डाँफे केयरले एक साताको अवधिमा एक सय ५० संक्रमितको उपचार गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा कोभिड १९ को दास्रो लहरको संक्रमण तिब्र गतिमा फैलिरहेको छ । संक्रमितको संख्याले दिन प्रतिदिन नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको अवस्था छ । मृत्यू हुनेको संख्या पनि बढ्दो छ । महामारीको दोस्रो लहर विगतको भन्दा संक्रामक र भयावह हुन सक्ने संकेतहरु पछिल्ला केही दिनको संक्रमण तथा मृत्युदरले पनि प्रष्ट देखाई रहेको छ ।
कोरोना संक्रमित बिरामीले अधिकांस अस्पतालका आइसीयू (इन्टेन्सिभ केयर यूनिट) तथा वेडहरु भरिएको अवस्था छ । कोरोना संक्रमित अस्पतालका छिडिमा उपचारको पर्खाइमा देखिन्छन् । दोस्रो लहर पहिलो भन्दा भयावह भएकै कारण संक्रमण हुने वित्तीकै मरिन्छ भन्ने भय र त्रासले मानव जिवन खलबलिएको अवस्था छ । सरकारले बैशाख १७ गते सूचना जारी गरेर अस्पतालहरुले थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको घोषणा गरिसकेको छ । त्यसमा पनि अस्पतालहरुमा अक्सिजन, भेन्टीलेटरहरु, क्वारेन्टीनहरुको अभाव पनि बढ्दै गएको छ ।
तर, कोरोना संक्रमण हुनेवित्तीकै हस्पिटल नै धाउनु पर्ने अवस्था भने होइन् । कोरोना संक्रमणपछि देखिएका लक्षण र शारिरिक अवस्था अनुसार हस्पिटल जाँदा पनि हुन्छ । जटिल स्वास्थ अवस्था नभई पनि हस्पिटल जान हतार गर्न भन्दा पनि घरमै होम आइसोलेसनमा बसेर डिजिटल स्वास्थ सेवा प्रदायक संस्थाको सम्पर्कमा बस्नु उपयुक्त हुन्छ । होम आइसोलेसनमा रहदै गर्दा डाँफे केयरसंग जोडिएका सेवाग्राीहको स्वास्थ अवस्था जटिल भएको खण्डमा एम्बुलेन्स तथा हस्पिटल खोज्न समेत सहयोग गरिदिने समेतको सेवा रहेको छ ।
डाँफे केयरले होम आइसोलेसनका कोरोना संक्रिमितका लागि १० दिने विशेष सेवा संचालन गरिरहेको छ । जस अन्र्तगत संक्रमितलाई शारिरिक, मानशिक, मेडिकल सपोर्ट, नियमित अनुगमन, अनलाइन परामर्श, टेलिमेडिसिन, पोर्टेबल मेसिनहरु घरमै पु¥याई प्रयोगशालाको व्यवस्था लगायतका सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । डाँफे केयरमा जेडिएका कोरोना संक्रमितले ल्याब तथा औषाधि बाहेक दैनिक ३ सय रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ । डाँफे केयरको होम आइसोलेसनले अहिले संसारका जुनसुकै कुनामा रहेका कोरोना संक्रमित नेपालीलाई भर्चुअल माध्यमबाट सेवा दिदै आइरहेको डाँफे केयरका प्रोग्राम कोअर्डिनेटर डा. कविन मलेखुले बताए।
कोरोना लागेका मान्छेहरु मध्ये कसैलाई लक्षण देखिन्छ भने कसैलाई कुनै प्रकारको लक्षण देखिदैन । लक्षण देखिने मध्ये माइल्ड, मार्डेटर, सिभियर गरी तिन चरणको हुन्छ । यसमध्य लक्षण नदेखिएका र माइल्ड, मोर्डेटरका बिरामी सितिमिति अस्पताल जानु पर्दैन । यसर्थ संक्रमित मध्य पनि ८० देखि ९० प्रतिशतलाई होम आइसोलेसन काम लाग्छ ।
डाँफेको सेवा कसरी लिने ?
डाँफे केयरमा फोन गरेर, ई सेवा मार्फत कोभिड होम आइसोलेसन, फेसबुक, खल्ति र डाँफेको वेभसाइटबाट फर्म भरेर सहभागी हुन सकिने डा. मलेखुले बताए । यो सेवा नेपालको काठमाण्डु भित्र मात्र नभई संसार भरका नेपालीले लिन सक्छन । पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणको समयमा वेल्जियम, अमेरिका, म्यानमार लगायत देशहरुमा रहेका नेपालीले समेत सेवा लिएको उनले बताए ।
“हामीसंग दक्ष तथा अनुभवी डाक्टर तथा नर्सहरुको टिम छ,” मलेखुले भने,“ उपत्यका भित्रका सेवाग्राहीलाई गाह्रो पर्यो भने डाक्टर नै पठाउँछौ ।” भौतिक रुपमा डा. उपस्थिति सम्भव नभएको स्थानमा भर्चुअल माध्यमबाट सेवादिइरहेको डा. मलेखुले बताए ।
डाँफे केयरले कसरी सेवा दिइरहेको छ ?
कोरोना लागेको समय के गर्ने ? के नगर्ने ? के खाने ? कसरी बस्ने ? कसलाई सर्न नदिन के गर्ने ? कस्तो परिस्थितिमा के केस्तो औषधी खाने ? कुन परिस्थितिमा अस्पताल जानु पर्छ भन्ने विषयको जानकारी संक्रमितलाइ दिइन्छ । यो अवस्थामा संक्रमितका लागि अस्पताल आवश्यक छ छैन लगायका विषयमा सुझाव दिने तथा आवश्यक मद्दत गर्ने काम डाँफेले गर्दै आएको छ ।
डाँफेमा बिहानको समयमा मेडिटेसन सुरु हुन्छ । त्यसपछि श्वास प्रस्वास सम्बन्धी अभ्यास, क्रमश डक्टरको कन्सल्टेसन, नर्सको मनिटरिङ तथा मेडिकल हिष्ट्रिहरु लिने काम हुन्छ । परिस्थिती अनुसार उपत्यकाभित्र डाक्टर, नर्स र ल्यावहरु पनि पठाउँने गरिएको डा. कबिनको भनाई छ ।
आइमार्क प्रा.लिले सम्पूर्ण क्षेत्रमा डिजिटाईलेशन सेवा विस्तार गर्ने क्रममा हस्पिटल म्यानेजमेन्ट र इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड सिस्टम सहित डाँफे केयरको सुरुवात गरेको हो । एक दशक भन्दा लामो समयदेखि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटाईलेशनको काम गर्दै आएको आइमार्कको डाँफे स्वफटवेयरको प्रयोगबाट पारदर्शी हस्पिटल म्यानेजमेन्ट, विरामीको मेडिकल इन्फरमेशन तथा सेवाग्राहीको गुणस्तरीय सेवाको परिकल्पना गर्दै सुरु गरिएको हो ।
डाँफेको सफ्टवेयरमा ३० मोडलहरुको विकास गरिएको छ । अस्पतालको सम्पूर्ण सेवा, डाक्टर, औषधि, ल्याब, लेखाका काम, आयस्रोतको रेकर्ड, रिर्पोट र अस्पतालमा हुने सम्पूर्ण चेकजाँजको विबरणहरु एकीकृत रुपमा डाँफे प्रणालीमा उपलब्ध हुनेछन् ।
विरामीको रेकर्ड अस्पतालमा रहने हुँदा अर्को पटक विरामी आउँदा विरामीको समस्या, उपचार, औषधिको प्रेस्पिक्सन सहज रुपमा देखिनेछ । यसले डाक्टरको उपचार प्रवृतिको विकासमा समेत टेवा पुर्याउछ ।